Dr. Xanafi: “Maadaama Uu Cudurka Ebola Ku Fiday Ugada Waa In Soomaalidu Ka Digtoonaataa” (Dhageyso) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dr. Xanafi: “Maadaama Uu Cudurka Ebola Ku Fiday Ugada Waa In Soomaalidu Ka Digtoonaataa” (Dhageyso)
Last updated Jun 16, 2019 516 0
Dhaqtarku wuxuu sheegay in cudurkan uu yahay mid dilaa ah oo si fudud ku faafa, wuxuuna muujiyay walwal uu ka qabo Alle naguma keeno’e inuu Soomaaliya soo gaaro, wuxuuna u sababeeyay ciidanka Uganda oo kamid ah askarta kusoo duushay dalka.
Waxa kaloo uu sheegay in madaxda DF ay mar walba u safraan wadankaas taasnina ay keeni karto iney cudurka usoo qaadaan wadanka. Ummadda Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay iney feejignaan weyn ka muujiyaan cudurkan.
Ciidamada Uganda ayaa intooda badan dhex deggan magaalada Muqdisho oo ah caasimadda wadanka iyagoo sidoo kale jooga garoonka diyaaradaha ee Xamar oo ah ay si weyn uga faafin karaan maadaama ay dadka gacma-gacmeeyaan, cudurkana uu ku fido is taabashada iyo in dheecaanka qofka qaba uu gaaro qof kale oo bad qaba.
Halkan Ka Degso Wareysigada Dr Xanafi